2019 - Raaso News Network ( RNN )
Xaqiiqada 1-aad: Markii ugu horeesay kulan EPL ah ayay Man United qaybta hore cayaarta sedex bedel adeegsatay. Xaqiiqada 2-aad: Mohamed Salah 4-kulan uu EPL wajahay Man United wax gool ah kama dhalinin sidoo kalena wax gool ah kuma caawinin. Xaqiiqada 3-aad: David De Gae wuxuu sameeyay 100-kulan EPL ah inuu shabaqiisa ilaashtay sidoo kalena waxaa darajadan kaga horeeyay goolhaye Peter Schmeichel oo isagana 112-kulan ...
Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay Carabao Cup kadib markii ay rigoorayaal ku garaacday Kooxda Chelsea. Cayaar lagu jilbo murxay kadib ayaa kusoo dhamaatay 0-0 iyadoo lagu daray 30 daqiiqo dheeri ah balse wax gool waa la iska dhalin waayay. Dhamaadkii cayaarta ayaa waxaa dhacday layaab kadib markii goolhayaha Chelsea uu soo gaaray dhaawac fudud waxaase badal ...
03/02/2019	Leave a comment
Real Madrid iyo Barcelona ayaa semi-finalka tartanka Copa del Rey wada ciyaari doona bishan Arbacada toddobaadkan iyo Arbacada ugu dambaysa bishan February, ka hor inta aanay afar maalmood kaddib garoonka Santiago Bernabue isku xidhanin kulankooda labaad ee horyaalka Xili ciyaareedkan ee LaLiga, kaas oo buuxinaya tirada afar kulan oo afar bilood gudahood ay wada ciyaareen. Is aragga hore ayaa waxa ...
Tababaraha ku meel gaadhka ah ee Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa shaaciyay in kulan kasta uu waqti la qaato tababarihiisii hore ee Sir Alex Ferguson oo Old Trafford saamayn ku yeeshay tan iyo maalintii uu Jose Mourinho kooxda ka baxay. Sir Alex Ferguson ayaa ka fogaaday shaqada United muddadii uu Mourinho soo maamulayay laakiin hadda Ole Gunnar ayaa runta ...
Cristiano Ronaldo ayaan ku faraxsanayn natiijadii barbar-dhaca ee kooxdiisa Juventus ay xalay la gashay naadiga yar ee Parma oo dagaal xilli dambe ay galeen kula barbarreeyey. Juventus oo toddobaadkii horena ka hadhay tartanka Copp Italia ayaa waxay xalay martigelisay Parma, waxaana mar ku hoggaaminaysay 3-1, hase yeeshee halyeygii reer Ivory Coast ee Gervinho ayaa laba gool oo degdeg ah, isla ...
Manchester United ayaa go’aan ka gaadhay mustaqbalka laacibka khadka dhexe uga ciyaara ee Juan Mata oo kooxaha Arsenal iyo Barcelona ay doonayaan inay si xor ah ugala wareegaan. Xiddiga reer Spain ee 30 jirka ah ayaa uu qandaraaskiisu ku egyahay dhamaadka xili ciyaareedkan, waxaana ay taasi keentay in kooxo badan ay albaabada u furaan iyagoo doonaya inay helaan adeeggiisa ciyaareed, ...
Kooxda Atletico Madrid ayaa dhamaystirtay heshiis amaah 18 bilood ah oo ay Chelsea kaga soo qaadatay gool dhaliyaha reer Spain ee Alvaro Morata kaas oo hadda qayb ka noqday taariikhda ciyaartoyda u soo wada ciyaaray kooxaha magaalada Madrid ku xifiltama ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. Alvaro Morata ayaa laba jeer Real Madrid u soo ciyaaray wuxuunau soo saftay 63 ...
Kaddib markii uu ugu soo bilawday kulan ka tirsan siddeed dhammaadka Dutch Cup isla markaana uu kamid ahaa xiddigihii ugu bandhiga fiicnaa ee kooxda u sahlay inay gaadhaan wareega afar dhammaadka, Xiddiga mustaqbalka ee Barcelona ee Frankie De Jong ayaa dareemay inuu haatan raaxo dareemayo. “Haatan waxaan dareemayaa raaxo, Imika waa markii De Ligt” Ayuu Frankie kula kaftamay De Ligt ...
Ka hor intii aanay Barcelona ku dhawaaqin heshiiskiisa, waxa jiray kooxo kale oo wada-hadallo kula jiray, isla markaana ay u muuqatay rajo ah inay nasiib u yeelan doonaan heshiiskiisa oo uu kusoo biiri doono xagaaga soo socda, hase yeeshee taasi ma hirgelin. Manchester City ayaa si gaar ah xidhiidh ula samaysay kubbad sameeyaha reer Netherlands ee Frenkie de Jong, waxaanay wada-hadallo ...
Kooxda Tottenhama ayaa warbixin caafimaad ka soo saartay dhaawicii soo gaadhay xidiga kooxdeeda ee Dele Alli wuxuuna noqday war gilgilay jamaahiirta kooxda Spurs isla markanaa musiibo hor leh ku abuuray kooxda kaalinta saddexaad ee Premier league ku jirta ee Tottenham. Laakiin xaalada waalida ah ee ay Tottenham gashay waxay faa’iidadii ugu waynayd u noqon kartaa kooxaha Chelsea, Arsenal iyo Manchester ...